Ny vaovao farany rehetra amin'ny Internet amin'ny loharano iray | TeraNews.net |
Ny marika Sharp dia tsy te hisotro ronono. Ny fidinan'ny varotra tamin'ny taona 2020 dia nanjary fanovana lehibe teo amin'ny orinasa. Ary ny 2021 dia taona mahaliana ho an'ny smartphone Sharp ...
Tesla Cyberquad ATV ho an'ny Cybertruck Pickup
Elon Musk dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy fa ny Tesla Cyberquad elektrika ATV dia havoaka ho famokarana. Amidy misaraka na feno miaraka amina pickup ...
Fantatrao ve fa ny fampiasana matetika ny floss nify dia misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-nify. Mampirisika ny dokam-barotra fa mandrara ny mpitsabo nify. Rehefa dinihina tokoa, ny kofehy manoto ny sisin'ny nify, ...
Ny marika Huawei, Xiaomi, Honor ary ny maro hafa dia tsy mamela antsika hiala sasatra amin'ny tsenan'ny smartwatch. Tsy mitsahatra ny tototry ny vokatra misy karazany mitovy izy ireo, manova ny endrika sy ny fiasan'izy ireo. Fa…
Xiaodu dia marika sinoa fanta-daza mamolavola rindrambaiko sy fitaovana ho an'ny Baidu Corporation. Ireo teknolojia tsara indrindra miasa ao anatin'ny rindrin'ny orinasa sy ...
Tetikasa iray hafa hametrahana atiny tsy ara-dalàna no nandao ny Internet manerantany. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nahomby ny vavahady portiogey MrPiracy. Ny zavatra tena mahaliana dia ny fiheverana ilay tranonkala ...
Fairphone - Smartphone ho an'ny teknisiana sy matihanina amin'ny IT
Ny taranaka faralahy dia tsy nanam-potoana hisamborana ireo fotoana nahafinaritra rehefa nanana rafitra maodely ny finday. Azo natao ny nanova ny bateria, nanova ny tranga na nanatsara ...
Ilay tetikasa "Citroen Skate" dia somary nitovy tamin'ny fitaterana an'ilay sarimihetsika "I am a Robot", izay nahasarika ny sain'ny tenany. Ity dia zava-bita lehibe tokoa amin'ny teknolojia, izay amin'ny fomba hafahafa ...
Fiaraha-miasa mahaliana iray no misolo tena ny marika famantaranandro elektronika japoney mahafinaritra sy mpialokaloka japoney. Ny andiam-fiambenana G-LIDE Casio G-SHOCK dia fenoina miavaka ...
Rehefa mpamokatra fanta-daza, miorina amin'ny famokarana finday avo lenta, mamokatra ny zava-drehetra dia mipoitra ny fanontaniana. Araka izany, ny mpitarika amin'ny famokarana finday Nokia dia mampiseho ...
Na iza na iza eto amin'ny planeta Tany dia mahalala fa i Shina no mpitondra eran'izao tontolo izao amin'ny fahaizany manamboatra. Io no fanjakana tokana ao amin'ny faritany misy ...
Ford mifidy angovo maintso
Na izany aza dia nanapa-kevitra ny hitantana fiara mandeha amin'ny herinaratra ny fitantanana fiara. Fampiasam-bola mitentina 7 miliara dolara no efa nekena. Ho an'ny tetikasa ...
Nipoitra tamin'ny fomba ofisialy ny famaritana vaovao momba ny tariby USB-C 2.1 sy ny mpampitohy. Ny hery amin'izao fotoana izao dia nijanona tsy niova - 5 Amperes. Saingy nitombo be hatramin'ny 48 volts ny herinaratra. V…
Fampirantiana ho fanomezam-boninahitra ny kintana rock Rita Lee
Ny MIS Museum of Art, any São Paulo, Brezila, dia nikarakara fampirantiana lehibe ho fanomezam-boninahitra an'i Rockstar Rita Lee. Ny mpitantana ny fampiratiana dia zanak'ilay kintana João Li. Nandimby ilay zanaka ...
Google dia mbola nanapa-kevitra ny handray dingana tena maika handrarana ireo plugins mety hanakana ny doka manelingelina. Amin'ny lafiny iray, ity fanavaozana ity dia hisy fiatraikany tsara amin'ny ...